कपडा धोएरै मासिक दुई लाख, साढे तीनतले पक्की घर बनाए मानबहादुरले « Khasokhas Follow @khasokhasmag
कपडा धुने पेसालाई कतिपयले घृणभावले पनि हेर्ने गर्दछन्, तर गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ६ आँपचौरका मानबहादुर विकलाई त्यो पेसा त्यति बेला मर्यादित लाग्यो जब उनी सात वर्ष अघि कतारमा गएर सोही काम गर्न पाए ।
कतारमा पुगेर त्यहाँको एक ड्राई क्लिनिकमा मेसिनबाट कपडा धुने काम गरेर तीन वर्षपछि फर्किएका मानबहादुरले त्यहाँ सिकेको सिपलाई स्वदेश मै प्रयोग गरेर स्वाराेजगार बन्ने सोच राखे । फलतः आज भन्दा सात वर्ष अघिको कुरा थियो । जति बेला गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा पहाडी मूलका मानिसहरूले कपडा धुन भनेको हीनताबोध गर्थे ।
तर उनले कतारमा संभ्रान्त परिवारका मानिसहरूले नै त्यो पेसा गरेको देखेर के को लाज ? भन्दै कपडा धुने मेसिन किनेर ‘शिद्धेश्वर ड्राई क्लिनिक’ सञ्चालन गरे । तम्घासको भिमचोक नजिकै रहेको त्यस पसलले मात्र ग्राहक थेग्न नसकेर अहिले तम्घासकै उदिनढुङ्गामा शाखा पसल समेत खोल्न सफल भएका छन् ।
उनीहरू श्रीमान् श्रीमती र छोरा छोरी स्वरोजगार बन्नुका साथै उनले अन्य ६ जनालाई रोजगार समेत दिएका छन् । मासिक आम्दानी कति हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा मानबहादुरले भने –‘ त्यस्तै महिनाको दुई लाखसम्म कमाउने गरेको छु ।’
तपाईँ जस्तै अरू युवाहरूले सिक्न चाहे सिकाउनु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले अरूले लाज मानेर सिक्न नचाहेको बताए । उनले भने–‘ अरू मानिस त कपडा धुन लजाउन छन् सिक्नै चाहन्न । त्यस्ता मनिसहरु एक चोटि म जस्तै विदेश जाउन् तब थाह पाउने छन् कुनै पनि काम गर्ने मानिस सानो ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा । ’